Ny Didy Folo - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Asa loatra aloha izay ao an-dohan-dRhaj0 ao fa ny ...
Pejy: < 1 2 3 >
Miharena - 29/09/2017 21:54
Asa loatra aloha izay ao an-dohan-dRhaj0 ao fa ny marina anie dia efa voasoratra fa betsaka no tsy mino an'Andriamanitra e!
Tsy manakana ny mino sy mahalala AZY tsara izany ary izay mahalala AZY no tena tsy miaina anaty box-kely fa malalaka kokoa aza amin'ny fiheverana ny zava-drehetra.
Ny maha-samihafa ny mino sy ny tsy mino dia tsotra ihany : ny mino mahalala ny zava-drehetra ary mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety. Ny tsy mino kosa manao bontolo amin'ny eritreriny irery eny dia tsy fantany akory izay alehany. Ka asa hoe iza amin'ireo no box-kely.
rhaj0 - 02/10/2017 21:05
Dia ahoana indray azany ny fijerin'ireto fivavahana/finoana isan'isany ny @ "aza manao an'izao sy izao" (interdits).
B1. Do not destroy life.
ka iza no tompo-daka:
- ny Boudista, izay "aza manao an'izao" (interdits) daholo ny Didy Folo-ny.
- sa ny Amerindiana, izay TSISY "aza manao an'izao" (interdits) na iray azany ny azy.
Marihiina fa ry Judeo-chretien, na ilay Judaisme sy Kristianisma orijinaly, foana ihany no medaly volafotsy.
rhaj0 - 05/10/2017 18:46
Ka ireto Didy 10 ireto moa dia entina handaminana ny fiainana, na ny an'olona manokana na ny an'ny fiaraha-monina. Ny Didy sy Lalàna matetika, dia manabedy sy koa ny hitsinjovana ny ratsy hiseho.
Ilay fiainana anefa, noho ny antony samy hafa tsy hary ho tanisaina eto, dia toa "poritra" foana fotsiny i Raolona (ny "hanao ny voarara"). Ka rahefa "poritra" dia inona no atao, na fanafodiny, na "fampianarana" na "toro-hevitra" miroso sy tokony ho raisina??
Dia eto izany ireo Fivavahana/Finoana isan-tokony, ankoatry ny Amerindiana, ny mba ataony dia ny mamely be famaritana ny "aza manao an'izao" (interdits).
F'angaha izy io rey olona, ohatra hoe, poritra pipi ianao, dia baikoana fotsiny hoe,
Didy faha-11, AZA MIPIPI dia basy???
Miharena - 06/10/2017 14:23
Ny didy dia fitsipika enti-miaina hahasoa ny fiaraha-monina sy ny tenan'ny tsirairay.
Ny olana dia ity, ireo tranga rehetra nandrarana teo anie efa zava-nisy niainan'ny olombelona ary hita fa tsy nahomby e!
Izay mahomby no tiana hiainan'ny olombelona. Ka na iza io na iza dia mazava fa tsy misy iray tsy resy lahatra fa izay manao ny tsy mety no tsy mahomby amin'ny fiainana sy ny fitozoana amin'ny fiainana tsara kokoa.
Tsy resaka baiko izany ilay izy fa fampahatsiahivana noho ny fisian'ny mibirioka maro.
rhaj0 - 06/10/2017 17:19
Ny fahitako azy aloha h@ izao, dia tena relativement vendrana beuh kosany ny Judeo-chretin, raha miolotra @ ireo Finoana/Fivavahana hafa ho'a, raha io resaka Didy10 io. Aiza nama koa,
- insecure be tahak'n'inona, ka ny iankohofana @ Atry ny JC no 1/3-n'ny Didy. Ny an'ny hafa anefa mahatoky fa tsara ny azy, ary tsy mila mametraka izany ao @ Didy
- mba samy mpitaiza ihany, nefa ry JC dia "aza manao an'izany" no mba hainy asesy, tsisy torolalana hoe, inona azany no analana poritra
Ny tena maha-vendrana azy koa anefa, dia ireto Judeo-chretien anie ka Finoana/Fivavahana TAORIAN'iretsy hafa iretsy. Dia mba heverina hoe, mba naka anatra, na mba naka tahaka akoriny azany t@ ireo zokiny, nefa dia .. vendrana be eee...
rhaj0 - 06/10/2017 23:15
Dia hotry ny hoe izaho no Irainizeloza rahefa milaza fa "vendrana beuh" ny judeo-chretin.
Ndao azany haka ohatra faran'izay tsotra.
Hozy ny Judeo-chretien:
hozy ny Hindu
hozy ny Boudista
Hozy nefa ny Amerindiana:
Jereo @ saina TSY miangatra fa ny Amerindiana dia manome resaka paozitiva, hoe "izao no (tsara) atao". Mampiasa SAINA ny Didy 10 Amerindiana eo @ io, ary manoro ny hanao hetsika paozitiva.
Fa ny Judeo-Chretien (sy ny Hindu ary Bodista), dia tonga dia manentsina hoe, "aza manao an'izany". Raha mba mampiasa saina izao zareo, hoe "fa maninona", na koa hoe, "koa inona azany no atao rahefa poritra"?? Dia TSISY toro-lalana sy hetsika paozitiva azo tonga dia raisina avy eo @ Didy 10, fa tonga dia voapetapetaka be fotsiny hoe:
"Aza Manao @ Jeanne"
Miharena - 07/10/2017 14:05
Ilay mandahatra hoe iza no taloha dia diso amiko satria tsy finoana/fivavahana ilay taloha resahanao fa fomba fiainana nasehon'ireo mpandalina toa an'i Boudha sy Krishna.
Ny Judeo-Chretien indray dia hafatra avy any ambony fa tsy fiaimpianan'ny mpandalina sy mpitokana hitady fiononana tsy akory.
Ny tena marina dia izay olombelona hita fa tsy mahalala ny FOTONY no tena iantefan'ny Hafatr'Andriamanitra.
rhaj0 - 10/10/2017 14:57
Miharena ... tsy finoana/fivavahana ilay taloha resahanao fa fomba fiainana...
- i Andrmntra ve no mikipantsona à travers anao io ry Miharena kipantson'Atra,
- sa tena famelarana TSY-fahalalana ity ataonao io ry Miharena??
Miharena - 10/10/2017 15:10
Ny fahalalana anie avy amin'Andriamantra satria IZY no namorona ny atidoha sy ny saina mieritreritra tsara e!
Ka na ianao io aza kipantsona fa mety ho kipantson'ny tenanao ihany aloha fa tsy kipantson'Andriamanitra.
Fa na izany aza fantaNY ianao ary haiNY tsara ny momba anao Rhaj0 ka io resahako aminao io ny momba anao amin'ny maha-kipantsona ahy.
Izany hoe olona mamoromporom-pahamarinana ho an'ny tenany ny atheista. Izany hoe tsy mahita afa-tsy izay eritreretiny ho marina fotsiny ihany fa tsy mijery ireo hafatra sy fijoroana ary ny zava-misy marina tena marina. Asa loatra re na inona no ao anaty atidohany ao.
Ny olana anie Rhaj0 dia tsy heverinareo mahitsy tsara izay voalaza momba an'Andriamanitra fa mitifitra olona mino an'Andriamanitra no ataonareo raharaha eto e! Mba misaina vao miresaka aloha e!
Mbola tsy nahita fahatombenan-tsaina mandinika tsara aloha aho hatreto avy aminareo.
rhaj0 - 10/10/2017 15:41
Ka iAndrmtnra izany, hozy i Miharena, no miteny, à travers an'i Miharena hoe:
... tsy finoana/fivavahana ilay taloha resahanao fa fomba fiainana...
esy ee... dia tena mba ahoana koa azany ny fahaizana amam-pahalalan'Andtrmna izany k'le...
Miharena - 10/10/2017 18:54
Mazava be izany kah!
Manana traikefam-piainana sy fampivoarana fahendrena ny olombelona sasany fa tsy izy rehetra koa aza satria misy ireo izay tena tsy mandraharaha izay Masina sy mety eo amin'ny fiainana an!
Ireo tsy mandraharaha izay Masina na dia hendry aza dia tsy mahalala hoe handeha ho aiza rehefa miala eto an-tany eto.
Ny Fahalalan'Andriamanitra dia asehoNy amin'ny alalan'ny fitohizam-piainana aorian'ny fandaozana ny nofo eto an-tany.
Fa ra-ateista ve moa na dia tenenina hoe ianao io dia izao sy izao avy no rafitra ara-nofo sy ara-panahinao dia handa hatrany izy ao amin'ny heviny ao ihany.
rhaj0 - 10/10/2017 22:22
ndao indray jerena hoe ohatra ny resaka tontolo iainana. Dia hozy ny Bodista sy ny Amerindiana
Ny tontolo iainana (environment) kosa k'lou dia tena TSY takatry ny Judeo-Chretien sy ny Hindu ao @ Didy 10-ny aby ao mihintsy. Nefa anie ny fiainana dia mila jerena holistiquement eee..
Dia rahefa lazaina hoe "vendrana beuh" ho'a ry JC dia hotry ny tena no Irainizeloza
rhaj0 - 11/10/2017 20:23
Ndao indray jerena ny Didy 10 ny @ ikarakarana ny tenabe na ny vatana.
Fa dia tena mba manafatrafatra tsara kosany ny Amerindiana (ny vatana) sy HIndu (hasambarana sy fahafam-po) ary Boudista (ny @ fisotroana sy fisakafoana ary fatoriana, h@ ranomanitra):
B6. Eat temperately and not at all in the afternoons. .
Fa ry Judeo-Chretien kosany dia ... zero manatody raha ny @ ireo resaka ireo. Nefa indray, toa mametraka Didy ny @ sex ihany ry JC sy ry Hindu, izay tsy tena @ heviny hoe "ikarakarana ny vatana", fa toa @ ilay obsession-ny @ interdits raha resaka sex
rhaj0 - 12/10/2017 19:56
Fintiniko kely ny fampitaha h@ izao..
Averiko kely ireo fehin-kevitra (sady nahitsy kely)
rhaj0 Ny fahitako azy aloha h@ izao, dia tena relativement vendrana beuh kosany ny Judeo-chretin (JC), raha miolotra @ ireo Finoana/Fivavahana hafa ho'a, raha io resaka Didy10 io. Aiza nama koa,
1- insecure be tahak'n'inona, ka ny iankohofana @ Atry ny JC no 1/3-n'ny Didy. Ny an'ny hafa anefa mahatoky fa tsara ny azy, ary tsy mila mametraka izany ao @ Didy
2- Ny mampiankohoka ny madinika @ Debakely sy Debabe foana ihany no Didy mahamaika an-dry JC... TSISY respect (de la dignité) envers son prochain.
3- mba samy mpitaiza ihany, nefa ry JC dia "aza manao an'izany" no mba hainy asesy, tsisy torolalana hoe, inona azany no analana azy rehefa poritra
4- Jereo @ saina TSY miangatra fa ny Amerindiana dia manome resaka paozitiva, hoe "izao no (tsara) atao". Fa ny Judeo-Chretien (sy ny Hindu ary Bodista), dia tonga dia manentsina hoe, "Aza Manao @ Jeanne"
5- Fa ry JC kosany dia ... zero manatody raha ny @ ireo resaka "ikarakarana ny vatana" ireo. Nefa indray, toa mametraka Didy ny @ sex ihany ry JC sy ry Hindu, izay tsy tena @ heviny hoe "ikarakarana ny vatana", fa toa @ ilay obsession-ny @ interdits raha resaka sex
6- Ny tontolo iainana (environment) kosa k'lou dia tena TSY takatry ny Judeo-Chretien sy ny Hindu ao @ Didy 10-ny aby ao mihintsy. Nefa anie ny fiainana dia mila jerena holistiquement eee..
99- Ny tena maha-vendrana azy koa anefa, dia ireto Judeo-chretien anie ka Finoana/Fivavahana TAORIAN'iretsy hafa iretsy. Dia mba heverina hoe, mba naka anatra, na mba naka tahaka akoriny azany t@ ireo zokiny, nefa dia .. vendrana beuh eee...
Miharena - 17/10/2017 08:11
Raha atao tsara ny fandalinana amin'ny saina tsy miangatra momba ilay didy folo isanisany dia dia misy itovizany afa-tsy ny fisian'ny Mpahary voalaza ao amin'ny Kristianina.
Misy rafitra hajaina satria IZY no nipoiran'ny AINA.
Ny an'ireo hafa dia mazava fa fitondran-tena amin'ny maha-olombelona ihany.
Ka asa hoe inona no mahatonga ilay fanamarihana hoe tsy dia misaina loatra ilay manana MPAHARY hajaina!
Mitodika Amin'ny Loharano nipoirana moa izy io fa asa aloha ny fiheverana manafoana izany amin'ireo olombelona manao fitsipika avy amin;ny fandinihina fotsiny ihany milaza fa izy no mitana fahamarinana raha miteny hoe tsisy idiran'ny Mpahary io!!
rhaj0 - 17/10/2017 15:09
IZY izao koa ve ry Miharena no nipoiran'ny TSIRINAINA??
(izany angamba no tsy ialan'ny tananao ao anaty patalohanao an...
rhaj0 - 19/10/2017 19:48
rhaj0 ndao indray jerena hoe ohatra ny resaka tontolo iainana. Dia hozy ny Bodista sy ny Amerindiana
Ny tontolo iainana izany eto tena TSY takatry ny JC mihintsy hoe, rahefa ampiasaina anie izy io dia mila hay folahina, ary mila mba toroina ny ankizy, na hoe, mila ampitaina ny traikefa ao. Ka dia nafaran'ny Amerindiana ny zanany dia hoe, hajao sy karakarao ihany i Latera io fa aza atao @ izay danin'ny kibo ao fotsiny.
Io foana ilay hoe, rahefa mandeha any an'ala ry Amerindiana, dia miezaka izy ny tsy hitrifatrifana @ n'a pas ka mandravarava ny equilibre misy ao. Satria raha avadika anie ny vato, dia misy bibikely ohatra ao, ary (mety) izay mihintsy ny mampilamina ny eo ee..
Fa ny an-dry JCmoa izany ohatra, dia hoe, "Anjakao ny Tany", ary dia, rahefa mandeha anyu an'ala ry JC, dia fefeny ny ala, ary dia pehany ny boa de raozy eee...
Ny f(ifamp)ifehezana ny fiaraha-monina koa, dia tena tsisy afa-tsy ny Amerindiana no manoro, ary raha ny fahitako azy, dia tena manja:
Izany no tena hoe, Komionisma orijinaly.
Miharena - 20/10/2017 07:36
Ilay resaka hanjakao ny zavaboary tsy milaza hoe simbao ny zavaboary.
Mazana moa ny namana Rhaj0 manantailana fomba fijery izay fa tsy mahitsy loatra.
Ka raha hilaza ianao hoe finoana ireo resahan'ny Bodista sy ny Amerindiana ireo dia hoy aho hoe tsia satria ny finoana dia miankina amin'ny Mpahary no tena marina. Miresaka AMINY MPAHARY ka raha tsy misy izay fomba izay dia tsy finoana sy fivavahana izany.
rhaj0 - 20/10/2017 14:31
Miharena Ilay resaka hanjakao ny zavaboary tsy milaza hoe simbao ny zavaboary.
Dia atsipy fotsiny toa io, tsisy poukoi sy coman toa ny avy eny ambony alitara ve izy ity ry Miharena aa...
Fa dia velabelaro kely azany hoe ry Miharena (mba misy ihomehezana indray...)
Fa TSISY miresaka @ "Mpahary Mpahary"-NAO izany ny olona ry Miharena aa.. Ny Amerindiana dia miresaka @ Grand Manitou: Izy io no tompon'ny zava-drehetra, fa raolona mpindrana ihany. Ny HIndou dia miresaka @ Ganesh sy iza indray moa ilay "Mpamorona ny Mpamorona" teo.
Ny "Mpahary Mpahary"-NAO Miharena dia TAORIAN'ny an'ny HIndou ho'a.. Asa mihintsy hoe, ahoana no tsy mety tafiditra @ sainao izany. Satria ve ilay "Mpahary Mpahary"-NAO TSY nikaozy anao an'izany? Tsy takatry ny "Mpahary"-n'i Miharena tokoany hoe, IZA no namorona Azy.
Miharena - 23/10/2017 14:07
Efa hita ny tantara momba ny fahaverezan'ny olona noho ny fanarahana eritreritra sy baiko hafa ankoatry ny Mpahary azy. Fa ny olana dia ity, nanao izay tiany ny Anjely nivadika mpitaiza ny olombelona dia lasa nanao ity resaka vola sy harena izay manimba ny zavaboary ity ka hamidy daholo ny zava-drehetra dia simba e! Ny kapitalisma ohatra dia ny olombelona ihany no namorona azy dia io korontana ambony ambany io. Ka aoka havahana tsara aloha ilay hoe sitrapon'olombelona sy ny sitrapon'Andriamanitra.
Raha hilaza indray hoe taloha ny an'ny Hindoue sy ny Amerindiana dia tsy izay loatra ny fandraisana azy satria raha misy ny inspiraka avy any ambony azon'ny tsirairay dia misy itovizany aby. Fa ILAY miteny mihitsy izay manome anatra mivantana tsy dia hita tamin'ny Hindoue sy Amerindiana, sa azonao hazavaina tsara hoe ahoana no nahazoan'ireo io didy folo azony io?
Raha izay indray manko hoe taloha izy ireo dia tokony ho fantatra hoe ahoana no nahazoana ilay didy dia hita eo hoe resaky ny Ntaolo samy olombelona nifananatra sa resaky ny Mpahary niandohana mihitsy mivantana amin'ny voariny.